असोज मसान्तसम्म लक्षित भन्दा धेरैलाई खोप - Pathibhara Channel
Pathibhara Channel सोमवार, कार्तिक १, २०७८ | October 18th, 2021 फोटो फिचर, ब्रेकिंग न्युज, मुख्य समाचार, समाचार
काठमाडौं, १ कातिक । कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लक्षित जनसंख्याभन्दा बढीलाई लगाइएको छ । नेपाल सरकारले यही असोज मसान्तसम्म लक्षित जनसंख्याको कम्तीमा पनि एक तिहाइलाई यो खोप लगाउने लक्ष्य लिएको थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले असोजमसान्तमा लक्षित जनसंख्यामध्ये ३३ प्रतिशतलाई खोप लगाउने लक्ष्य राखेकामा उक्त लक्ष्यभन्दा बढीलाई नै खोप लगाएको सो मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
सोही प्रतिबद्धता बमोजिम स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा सरकारले खोपको व्यवस्था पनि गरेको हो । मन्त्रालयको परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. विवेककुमार लालले असोज मसान्तभित्र लक्ष्यभन्दा बढीलाई नै खोप लगाएको जानकारी दिए ।
मन्त्रालयको असोज मसान्तसम्म ३३ प्रतिशत, पुस मसान्तभित्र दुई तिहाइ र चैत मसान्तभित्रमा लक्षित सबै नेपालीलाई खोप लगाउने योजना रहेको छ । महाशाखाको बालस्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख सागर दाहालका अनुसार अहिलेसम्म नेपालमा एक करोड ८८ लाख ५८ हजार ७१० मात्रा खोप नेपाल आइसकेको छ ।
सरकारले १२ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई मोडर्ना ४० लाख र ६० लाख फाइजर खोप ल्याएर लगाउने तयारी गरेको छ । यस्तै चीनबाट भेरोसेल खोप यही अक्टोबरमा १६ लाख मात्रा र पुससम्ममा ५९ लाख ३६ हजार ४०० मात्रा ल्याउने तयारी पनि थालेको उनले बताए ।
अहिलेसम्म कुन प्रदेशमा कतिले लगाए खोप ?
कोभिड–१९ विरुद्धको खोप कार्यक्रम अन्तर्गत लक्षित जनसंख्यामध्ये २९.७ प्रतिशतले पूर्ण खोप लगाएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको असोज ३१ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार ६४ लाख ६९ हजार १५९ जनाले दुई डोज खोप लगाएका छन् ।
त्यस्तै पहिलो डोज खोप लगाउनेको संख्या ८३ लाख ८८ हजार ४०२ (३८.६) प्रतिशत रहेको छ । पूर्ण खोप लगाउनेमध्ये प्रदेश १ मा ७ लाख ६५ हजार ८२१, प्रदेश २ मा १० लाख ३० हजार १९३, वाग्मती प्रदेशमा २३ लाख ६९ हजार २२७, गण्डकीमा ६ लाख २३ हजार ९८२, लुम्बीनीमा ८ लाख ८९ हजार ९७७, कर्णालीमा २ लाख ६१ हजार ४३३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५ लाख २८ हजार ५२६ रहेको छ ।